FTC र ट्र्याक नगर्नुहोस्
ट्र्याक नगर्नुहोस्: के मार्केटर्सलाई थाहा पाउनु पर्छ
बुधवार, जनवरी,, २०१२ सोमबार, सेप्टेम्बर 28, 2020 Douglas Karr
पहिले नै एफटीसीले इन्टरनेट कम्पनीहरु लाई अनुरोध गरिएको सुविधाहरु लाई सक्षम बनाएको छ कि उपभोक्ताहरुलाई ट्र्याक गर्न नसक्ने बनाउन को लागी अनुरोध को बारे मा पहिले नै केहि समाचार भएको छ। यदि तपाईंले १२२ पृष्ठ पढ्नु भएको छैन भने गोपनीयता रिपोर्ट गर्नुहोस्, तपाईलाइ लाग्छ कि एफटीसीले बालुवामा केहि प्रकारको रेखा सेट गरिरहेको छ सुविधाको लागि उनीहरूले अनुरोध गरिरहेको ट्रयाक नगर्नुहोस्.
के हो ट्रयाक नगर्नुहोस्?
त्यहाँ धेरै जसो कम्पनीहरूले उपभोक्ता व्यवहार अनलाइन ट्र्याक गर्छन्। सब भन्दा लोकप्रिय, अवश्य पनि, ब्राउजर कुकीज हो जुन डाटा र जानकारी भण्डारण गर्दछ जब तपाईं साइटसँग अन्तर्क्रिया गर्नुहुन्छ। केही कुकीहरू हुन् तेस्रो-पार्टीमतलब, एक उपभोक्ता बहु साइटहरु मा ट्र्याक गर्न सकिन्छ। साथै, त्यहाँ फ्ल्यास फाइलहरू मार्फत डाटा क्याप्चर गर्ने माध्यमहरू छन् ... यी समयावधि सकिदैन र सामान्यतया मेटिने छैन जब तपाईं आफ्नो ब्राउजरमा कुकिज खाली गर्नुहुन्छ।
ट्रयाक नगर्नुहोस् FTC एक वैकल्पिक सुविधा हो जुन FTC कार्यान्वयन गर्न चाहन्छ कि उपभोक्तालाई ट्र्याक हुनबाट रोक्नको लागि शक्ति प्रदान गर्दछ। एउटा विचार भनेको केवल जब ट्र्याक गरिएको डाटाको साथ विज्ञापन राखिएको हुन्छ, ग्राहकलाई डाटा क्याप्चर र विज्ञापनबाट बाहिर निस्कन प्रस्ताव गर्दछ। FTC बाट अर्को विचार भनेको सट्टामा प्रदान गर्नु हो ठीक समयमा डाटा जुन उपभोक्ताको प्रासंगिक विज्ञापन राख्नको लागि अनुमतिसँग प्रयोग गर्न सकिन्छ।
यद्यपि एफटीसीले यी सुझावहरू बनाएको छ ... र एक संकेतको एक बिट कि यदि उद्योग केहि संगै आएन भने, तिनीहरूले सक्छ… तिनीहरूले पनि यस्तो प्रविधि को नतीजा चिन्न। सत्य यो हो कि जिम्मेवार मार्केटरहरू र अनलाइन कम्पनीहरूले ब्यबहार डाटा प्रयोग गरीरहेका छन् राम्रो, अधिक प्रासंगिक प्रयोगकर्ता अनुभव। FTC ले यो बताउँदै स्वीकार गर्दछ:
कुनै पनि त्यस्तो संयन्त्रले अनलाइन व्यवहार विज्ञापनहरूले गर्ने फाइदाहरूलाई कमजोर पार्नुहुन्न, अनलाइन सामग्री र सेवाहरू कोष र धेरै विज्ञापनदाता कि निजीकृत विज्ञापन प्रदान गरेर।
गोपनीयता रिपोर्ट मा जान्छ कि कुनै केन्द्रीय रजिस्ट्री गर्नुहुन्न कल सूची व्यावहारिक छैन र समाधानको रूपमा खोजी गरिने छैन। FTC गोपनीयता रिपोर्ट, आफैंले, धेरै ठूलो प्रश्नहरू खडा गर्दछ:
कसरी यस्तो संयन्त्र हुनुपर्छ प्रस्ताव राख्नु उपभोक्तालाई र प्रचारित गर्न?
कसरी यस्तै संयन्त्र को रूप मा डिजाइन गर्न सकिन्छ स्पष्ट र प्रयोगयोग्य उपभोक्ताहरु को लागी सकेसम्म?
के हो सम्भावित लागत र बेनिफिटहरू संयन्त्र प्रस्ताव को? उदाहरण को लागी, कति उपभोक्ताहरु
सम्भावित लक्षित विज्ञापन प्राप्त गर्नबाट जोगिन सक्छ?
कति उपभोक्ताहरू, निरपेक्ष र प्रतिशतको आधारमा, यो प्रयोग गरीरहेको छ अप्ट-आउट उपकरणहरू हाल प्रदान गरिएको?
सम्भावना के हो प्रभाव यदि उपभोक्ताहरूको ठूलो संख्या अप्ट आउट गर्न छनौट गर्नुहुन्छ भने?
यसले कसरी अनलाइन प्रकाशकहरू र विज्ञापनकर्ताहरूलाई असर गर्दछ, र यसले कसरी गर्दछ उपभोक्ताहरुलाई असर?
एक को अवधारणा हुनु पर्छ सार्वभौमिक विकल्प संयन्त्र अनलाइन व्यवहार विज्ञापन भन्दा बाहिर विस्तार र समावेश गर्न को लागी, उदाहरण को लागी, मोबाइल अनुप्रयोगहरु को लागी व्यवहार विज्ञापन?
यदि निजी क्षेत्रले स्वेच्छाले प्रभावकारी एकरूप विकल्प संयन्त्र लागू गर्दैन भने, FTC गर्नुपर्छ कानून सिफारिस गर्नुहोस् यस्तो संयन्त्रको आवश्यकता छ?
त्यसोभए ... यस बिन्दुमा नडराउन कुनै कारण छैन। ट्रयाक नगर्नुहोस् निश्चित कुरा होइन। मेरो अनुमान छ कि यो कहिले पनि जनताले अपनाउने छैन। यसको सट्टामा, मेरो पूर्वानुमान यो छ कि रिपोर्टले अधिक पारदर्शी गोपनीयता र साइटहरूमा ट्र्याकिंग सेटिंग्समा लैजान्छ (अट्न: फेसबुक)। यो कुनै खराब कुरा होइन, मलाई लाग्छ प्रायः वैध मार्केटरहरूले कडा र स्पष्ट गोपनीयता कथनहरू र नियन्त्रणहरूको मूल्यांकन गर्दछन्।
म व्यक्तिगत रूपमा हेर्न चाहन्छु कि ब्राउजरले केहि लगि and र मेसेजि util युटिलिटीहरू अपनाउँछन् जुन प्रयोगकर्ताहरूलाई उनीहरूको डाटा स is्कलन गर्दा स्पष्ट भण्डारको साथ प्रदान गर्दछ, कसले यसलाई भण्डार गर्दैछ, र कसरी यो प्रासंगिक विज्ञापन वा गतिशील सामग्री प्रदर्शन गर्न प्रयोग भइरहेको छ। यदि उद्योगले केहि मानक प्रदान गर्न सक्दछ भने, यो दुबै उपभोक्ताहरू र मार्केटरहरूको लागि एक ठूलो प्रगति हो। थप जानकारीको लागि, भ्रमण गर्नुहोस् ट्रयाक नगर्नुहोस् सहयोग वेबसाइट।
टैग: कल नगर्नुहोस्ट्रयाक नगर्नुहोस्ftcठीक समयमा
अफलाईन मोडको साथ ईमेल उत्पादकता वृद्धि गर्नुहोस्
Aprimo: मार्केटिंग टेक भिडियो